विद्या भट्टराईको भाग्यमा १५ गते ! | News Nepal
>>विदेशमा रोकिएका डेढ सयबढी नेपालीका शव ल्याउने तयारी
>>स्वदेश फर्कनेको सहजीकरण गर्न २६ बुँदे कार्ययोजना
>>भारतसँगका असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गरौं : नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठ
>>बैतडीको क्वारेन्टाइनमा २२ वर्षीया युवतीको मृत्यु
>>अमेरिकामा हिंसात्मक प्रदर्शन नरोकिएपछि ट्रम्पले भनेः अब सेना परिचालन गर्छु
विद्या भट्टराईको भाग्यमा १५ गते !
काठमाडाैं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि भएको उप निर्वाचनमा कास्कीबाट उम्मेदवार बनाए विद्या भट्टराईले निर्वाचनमा जित हासिल गरेपछि भनिन्, मेरो जित रवीन्द्रप्रतिको उच्च सम्मान हो ।
यसैबाट प्रष्ट हुन्छ उनले निर्वाचनमा भारी मतले जित्नुमा सहानुभूतिले ठूलै काम गरेको छ । उनले स्वयम पनि यसरी बोलेपछि यसलाई थप भन्नूपर्ने कुरा नै के रह्यो र ?
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी ओली सरकारका एकजना मन्त्री थिए । विद्यार्थी राजनीतिबाट कम्युनिष्ट आन्दोनलमा होमिदै मन्त्री बनेका रवीन्द्रलाई सायदै लागेको थियो होला की जनताको काम गर्दा गर्दै मृत्यु वरण गर्छु भनेर । तर, यस्तै भइदियो । ताप्लेजुङबाट फर्किदै गर्दा एकाएक समाचारहरु आउन थाले पर्यटनमन्त्री सवार हेलिकप्टर वेपत्ता । रवीन्द्र सवार हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त । रहेनन् पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र । यसरी छिनछिनमा उनको मृत्युबारे खवरहरु आइरहेका थिए ।
रवीन्द्रले पर्यटनमन्त्रीको कुर्सी खाली मात्रै गरेर विदा भएका थिएनन् । उनका परिवार र उनले आर्जेको राजनीतिक विरासत समेत छाडेर गएका थिए । त्यसैको एउटा रुप हुनसक्छ उनको अन्तिम दाहसंस्कारमा पोखरेली जनताको सहभागीता ।
हजाराैं मानिसहरु रवीन्द्रको अन्तिम संस्कारका सहभागी भएका थिए । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा अन्तरगत कास्कीको क्षेत्र नं २ को सीट खाली बनेको थियो । त्यो क्षेत्र खाली भएदेखि नै विभिन्न चर्चा र अड्कलहरु गरिए । कहिले कसको नाम त कहिले कसको नाम उप चुनावको उम्मेदवारको रुपमा आइरहन्थ्यो नै । यसैमा नेकपाले रवीन्द्र पत्नी विद्यालाई न टिकट दिने घोषणा गरेपछि भने यसले अन्तिम रुप लियो । अब सदाका लागि उपचुनावमा अरु नेताहरुको नाम नआउने पक्का बनेको थियो ।
यसरी विकशित घटनाक्रमले नयाँ रुप लिदे अन्ततः उनले उप चुनावमा विजय प्राप्त गरेरै छाडिन् । उनी अब जनताको प्रतिनिधि भएर प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरिक हुनेछिन् ।
प्राध्यापन पेशामा सक्रिय राजनीति छाडेर लागिसकेकि विद्यालाई सायदै लागेकोथियो होला । जनप्रतिनिधि भएर फेरी आउछु भनेर । तर, राजनीतिले यस्तो मोडमा ल्याइदियो की उनी अहिले जनप्रतिनिधि बनिसकेकी छन् ।
आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका खेमराज पौडेललाई ८ हजार बढी मतले पराजित गरेकी विद्यालाई एउटा कुरा भने संयोग जस्तै बनेको छ ।
०७५ को फाल्गुन १५ र ०७६ को मंसिर १५ । उनको जीवनमा यी दुबै १५ गते अविस्मरणिय रहनेछन् । उनको भाग्यमा मंसिर १५ गते अविछिन्न यात्रा तय गर्ने दिन बनेर आएको छ । हुनत कम्युनिष्टहरु भाग्यमा विश्वास नगर्लान तर, हाम्रो समाजले विहानीपख पत्रिका होस या अन्य संचार माध्यम राशीफल हेर्ने सुन्ने प्रचलन यथावत नै छ ।
फाल्गुन १५ मा उनले आफ्नो पति गुमाएकी थिइन भने मंसिर १५ मा तिनै पतिको अधुरा सपनालाई पुरा गर्न पतिकै स्थानमा आइपुगेकी छन् । यसरी विद्यको जीवनमा यी दुबै १५ गते विशेष र अविस्मरणिय हुनेछन् । विद्यालाई मंसिर १५ को हार्दिक बधाई तथा शुभकामना छ । फाल्गुन १५ लाई विर्सिने ऐतिहासिक क्षण बनोस शुभकामना ।
विदेशमा रोकिएका डेढ सयबढी नेपालीका शव ल्याउने तयारी
काठमाडाैँ । सरकारले विदेशमा रोकिएका नेपालीका शव पनि ल्याउने भएको छ। अलपत्र परेका नेपाली फर्काउन चार्टर्ड उडान गर्ने तयारी गरिरहेको...
काठमाडाैँ । सरकारले कोरोाना भाइरस (कोभिड–१९) को विश्वयापी संक्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिले स्वदेश आउनैपर्ने परिस्थितिमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सहजीकरण गर्न...
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतसँग विगतमा भएका सन्धि–सम्झौता खारेज गर्न माग गरेका छन् ।...
बैतडी । बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका–४ भटनाको एक विद्यालयमा रहेको क्वारेन्टाइनमा एक युवतीको सोमबार साँझ मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी...
अमेरिकामा हिंसात्मक प्रदर्शन नरोकिएपछि ट्रम्पले भनेः अब सेना परिचालन गर्छु
काठमाडाैँ । प्रहरीको नियन्त्रणमै रहेका बेला मारिएका अफ्रिकी मूलका अमेरिकी जर्ज फ्लोइडलाई न्याय माग गर्दै अमेरिकामा जारी विरोध प्रदर्शन क्रममा...
सेना परिचालनको प्रस्ताव लिएर प्रधानमन्त्री ओली शीतलनिवासमा
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) तीव्र गतिमा फैलिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सेना परिचालनको प्रस्ताव लिएर शीतलनिवास पुगेका छन्। सेना...
आज थप २२६ जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या १७९८ पुग्यो
काठमाडौं । पछिल्लो चौबीस घण्टामा थप २२६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा...
एमसिसीको कार्यक्रम तीन वर्षदेखि नै बजेटमा छः अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कोअर्पोरेशन (एमसिसी) अन्तरगतका कार्यक्रम तीन वर्षदेखि नेपालमा चलिरहेको बताएका छन्।...
संसदमा शून्य समय : रुकुम–पश्चिमदेखि कोरोना महामारीमै केन्द्रित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा आज पनि शून्य समयमा सांसदहरूले जातीय विभेदका कारण भएको रुकुम पश्चिमको घटना र कोरोना महामारीकै विषय उठेको...